‘तिम्राे तस्वीर’ एक श्रवणीय सांगीतिक काेसेली - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
‘तिम्राे तस्वीर’ एक श्रवणीय सांगीतिक काेसेली
अहिले यी दुर्इ युवा जुगलबन्दीका साथ ‘तिम्राे तस्वीर’ लिएर अाउने क्रममा छन् । अाखिर के हाे त ‘तिम्राे तस्वीर’? एउटै वाक्यमा भन्दा ‘तिम्राे तस्वीर’ अारबी खड्काका शव्दमा अर्जुन रसाइलीले संगीत गरेका अाठवटा गीतकाे सांगीतिक काेसेली हाे । याे सुगम संगीतलार्इ अाधार बनाएर लाेक, पप, अाधुनिक र गजल फ्लेवरमा सजाइएकाे छ।
एलबमकाे शीर्षक गीत संगीतकार अर्जुन रसाइलीले नै गाएका छन् । जिउँनलार्इ तस्वीर हेर्नुपर्ने बहानाकाे याे प्रेमील गीत माया गर्नेहरूका लागि अजम्बरी लाग्छ। शान्त-सुखाय-सुगम गीतकाे छनक प्रस्तुत गर्ने गीत हेर्ने हैन, सुन्ने गीतकाे गतिलाे उदाहरण बनेकाे छ भन्दा अन्यथा लाग्दैन । लाेक पप फ्लेबरमा मनाेज ढकालले गाएकाे ‘यसपाली कान्छी भेट भकाे बेलामा’ पनि दाेयम छैन । गम्भीर स्वरका धनी जगदीश समालले ‘अाज पनि त्यस्तै भयाे’ लार्इ अन्याय हुन दिएका छैनन्। उनी अाफ्नै बान्कीमा जमेकै छन् यस गीतमा।
एलबममा गायक सत्यराज स्वरूपराजले दुर्इवटा गीतमा स्वर भरेका छन् । ‘अाँखा राम्राे भनुँ कि म अाेठ राम्राे भनुँ ‘ पप फ्लबेरमा फास्ट विटमा छ भने ‘तिमीले सल्कायाै मनमा अागाे’ स्लाे बिटमा गतिलाे सुगम संगीत बनेकाे छ । अाचार्य वन्धुले गीतका शव्द र संगीतकाे कम्पाेजलार्इ न्याय गरेका छन् । उदय मनिलाकाे स्वरमा गुञ्जेकाे ‘युगाैयुग दिउला तिमीलार्इ’ एलबमकाे एक सशक्त गीत हाे । संगीतलार्इ गम्भीर बनाउने याे जाेडीले याे गीतलार्इ पनि अाफ्नै संगीतकाे स्कूलमा तानेर कर्णप्रिय बनाएकाे छ। किरण गजमेरले पप बिटमा अाएकाे ‘तिमीसँग मनका कुरा खाेलु खाेलु’ पनि युवापुस्तालार्इ तान्न सक्ने गीत बनेकाे छ । त्यस्तै, किशाेर शिवाकाेटीकाे स्वरमा रहेकाे ‘पत्थर मुटु बनाएर विदा मागी गयाै’ अाफैंमा एउटा गतिलाे सुन्ने संगीतका रूपमा उपस्थित छ।
‘तिम्राे तस्वीर’ एक श्रवणीय सांगीतिक काेसेली भएकाे छ। याे एलबम नेपाली गीत संगीतमा मूलधारकाे एलबमकाे काेटीमा छ। यसलार्इ परिचय दिनका लागि अरू विशेषण थपेर खुम्च्याउन जरूरी छैन । समय र स्थान जाेडेर बन्ने सन्दर्भकाे कशीमा नाप्दा पनि ‘तिम्राे तस्वीर’ अायाराम गयाराम संगीत सिर्जना हैन। याे हेर्नेभन्दा पनि सुन्ने संगीतका पारखीहरूका लागि एक संग्रहणीय एलबम हुन सक्छ ।
तर, अपवादमा ‘तिम्राे तस्वीर’ जमेर संगीत समीक्षा गर्न लायक एल्बम बनेकाे छ। भनिन्छ, गीत संगीत कम्तीमा पनि एक दशक बाँच्याे भने त्याे अायाराम गयाराम हुदैन, संगीत समीक्षाका लागि याेग्य हुन्छ। यस कडीमा ‘तिम्राे तस्वीर’ समीक्षायाेग्य हुन पनि सक्छ। त्यसका लागि यस एलबममा संलग्न सबै संगीत श्रष्टा सर्जकलार्इ साेध्नुपर्ने हुन्छ, अबकाे १० वर्षपछि तपार्इ तिम्राे तस्वीरका सिर्जनालार्इ हातका अाैंलामा गन्न सक्नुहुन्छ? छातिमाथि हात राखेर भन्दा जे उत्तर अाउँछ, अहिलेका लागि याे एलबमकाे रेटिङ पनि त्यही नै हाे।
समग्रमा ‘तिम्राे तस्वीर’ एक श्रवणीय सांगीतिक काेसेली भएकाे छ। याे एलबम नेपाली गीत संगीतमा मूलधारकाे एलबमकाे काेटीमा छ। यसलार्इ परिचय दिनका लागि अरू विशेषण थपेर खुम्च्याउन जरूरी छैन । समय र स्थान जाेडेर बन्ने सन्दर्भकाे कशीमा नाप्दा पनि ‘तिम्राे तस्वीर’ अायाराम गयाराम संगीत सिर्जना हैन। याे हेर्नेभन्दा पनि सुन्ने संगीतका पारखीहरूका लागि एक संग्रहणीय एलबम हुन सक्छ ।